Mijery toy ny zazavavy ao Brezila. Ny vehivavy breziliana
Angamba iray amin’ireo lehibe indrindra ny olana eo amin’ny tranonkala, ary ho ahy manokana. Mifanohitra amin’izany kosa ny boky momba ny ankizivavy any Islandy, sarotra ho ahy ny milaza saina tsy miangatra, satria izaho dia tena tia an’i Brezila sy ny Breziliana rehetra ho ahy ny toerana manokana, fa na izany aza aho, hiezaka ihany no miasa eo amin’ny zava-misy, izay hitako ary mianatra ho an’ny fiainana izao ao Brezila. Angamba, momba ny tarehiny, dia sarotra ny hanangona rehetra amin’ny borosy iray ihany — Brezila dia tena fanavakavaham-poko isan-karazany ny firenena, ary toy izany koa amin’ny fahombiazana mety ho hita toy ny mahazatra Eoropeana tarehiny, ary matetika Afrikana. Na izany aza, raha miezaka ny tsoahana sasany ny lamina isika, dia afaka manavaka ny vondrona mahazatra ankehitriny amerika latina endriky ny Eoropeana, Afrikana ary ny vondrona fa dia tena azo inoana fa teo anivon ny razambeny dia ny olona teratany ny Amerika Atsimo, ao ny endriky misy zavatra manokana avy amin’ny Indiana. Inona no tena mahatonga ny vehivavy ao Brezila dia mitovy amin’ny samy izy (mazava ho azy, ny»tia»ao amin’ny somary malalaka ny hevitry ny teny), ka izany no toetra manokana. Fianakaviana iray ny tena laharam-pahamehana eo amin’ny fiainan’ny isan-Latino, ka ny olana eto dia sahiran-tsaina tamin’ny mbola kely. Ny fitsipika ny fiaraha-monina izay»tsara»(tsy mitovy, ohatra, avy amin’ny firenena Aziatika) mba hanehoana hoe»asehoy ny»ihany inflame ny toe-draharaha sy ny filozofia»hanampatra». Tsy ny hevitrao fa ny vehivavy Breziliana, raha hoy izy ireo,(izay midika fa mamatotra»olom-pantatra»eto, izany dia mora kokoa noho ny any amin’ny firenena hafa), nefa izany dia amin’ny ampahany ihany no marina. Eny, ao Amerika latina, ny fiaraha-monina dia tsy mpandala ny nentin-drazana sy malalaka kokoa amin’ny resaka fifandraisana manokana, fa mandritra izany fotoana izany, misy tsipika mazava eo amin’ny Fiarahana, ary lehibe ny fifandraisana. Amin’ny rehetra ny toa frivolousness, ho zava-dehibe te hihaino azy, ny vehivavy Breziliana, izay afaka ny ho tena mahatoky.
Eo anatrehanao ataovy mahery toy izany fanambarana aho, dia nianatra ny antontan’isa, hafa ny hevitry ny olona, ary tsy ny indray mandeha nangataka io fanontaniana io ny Breziliana. Ankoatra izany, tamin’ny rehetra ny sahisahy ary ny sasany ho»adala»Breziliana, dia ny fahafinaretana izany ihany no mitarika ny»milamina ny fiainam-pianakaviana»,»efa vonona ho amin’ny traikefa nahafinaritra».
Ny fianakaviana dia zavatra Brezila tena zava-dehibe
Zavatra iray hafa izay mahatonga ny vehivavy Brezila tsy toy ny solontenan’ny firenena hafa, izay matetika antsoina hoe»mafana ra.»Izy ireo tena ny fitiavana ny tena fihetseham-po, ny fitiavana, ny mijaly, ny mitomany, ny fitenenan-dratsy fa na inona na inona, ny zava-dehibe indrindra mba ho velona, fa tsy ho foana, mahatsiaro. Ary, angamba ny hanan-danja kokoa karatra (tsy nanisa ny fisokafana, sariaka, sociability raiki-tampisaka ny Breziliana rehetra) ny vehivavy Breziliana, ny hatsarany. Raha miseho dia toa azo atao ny milaza (momba ny fanandramana manao tsy miady hevitra, tena.), ny zava-misy fa ny vehivavy Breziliana no tena tsara sy mamy amin’ny fifandraisana, izany dia empirical zava-misy. Ary raha miteny momba izany subjective zavatra toy ny hatsaran-tarehy, dia, mazava ho azy, ny olon-drehetra mifidy ho an’ny tenany, dia homeko ihany, ohatra ny mahazatra indrindra ny endrika ivelany ny vehivavy Breziliana, izay manapa-kevitra ho an’ny tenanao. Izany dia tsy ho vita ny hinia tsy mahalala ary ny endriny ny vehivavy Breziliana, satria azoko antoka fa maro aminareo izay mamaky ity lahatsoratra ity mba hahitana ny valin ny fanontaniana hoe»ny vehivavy Breziliana lehibe butts.»ary Eny, tena Misy sy ny fototarazo, ary amin’ny lafiny iray amin’ny fitiavana lehibe ho an’ny fanatanjahan-tena (na lahy na vavy), ary amin’ny lafiny iray hafa, lehibe hanitra nify sy ny koba tsara toto (ny mofo isan-karazany sy ny karazany — amin’ny lehibe iray vilia Breziliana nahandro). Aho liana amin’ny lohahevitra momba ny fifandraisana eo amin’ny lahy sy ny vavy, ary miezaka foana aho mba fanamarihana ny ahy ny fomba hanamboarana ny fifandraisana eo amin’ny olona ao Brezila, Asia, i Eoropa, Amerika latina, raha azo atao, fametrahana fanontaniana sy ny fianarana ny hevitry ny mpandray anjara ao amin’ny dingana, ary vao mijery. Tena faly mahita ny olona sambatra, faly, satria ny fiainana dia tsara tarehy, ary efa tsy misy isalasalana fa afaka milaza aho fa ao Brezila velona sambatra ny olona. ny fanangonana ny vaovao ilaina avy amin’ny dia lavitra ho an’ny mpanao dia lavitra. Ho hitanao ato ny toro-hevitra azo ampiharina ao amin’ny mikasa fitsangatsanganana, mifidy ny fananana any ivelany, nividy ny tapakila, ary ahoana no hahatonga ny tsirairay lavitra tsy hay hadinoina
← Ny Lahatsary Amin'ny Chat Miaraka Amin'ny Ankizivavy Amin'ny Alalan'ny Webcam
Fisoratana anarana ny fanambadiana ny portogey (Brezila) →